रोल्पामा माओवादी कमजोर भइसकेको छ, एमालेले धेरै पालिकामा जित्छ : कुमार दशौदी « Online Sajha
रोल्पामा माओवादी कमजोर भइसकेको छ, एमालेले धेरै पालिकामा जित्छ : कुमार दशौदी
वैशाख ३० गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी माहोलले गाउँघरलाई तताएको छ। यतिबेला विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकाहरूलाई मतादाताको घरदैलोमा धाउन भ्याइनभ्याइ छ। यसैगरी आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई जिताउनका लागि नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्।
यही चुनावी दौडमा व्यस्त छन्, नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा रोल्पा जिल्ला सह–इन्चार्ज कुमार दशौदी। उनी उम्मेदवार नभएपनि पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन गाउँ–गाउँमा पुगेका छन्।
एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका उनि ०३६ सालदेखि राजनितिमा सक्रिय छन्। अनेरास्ववियुबाट राजनितिक यात्रा थालेका उनि एमाले रोल्पा पूर्वसचिव समेत हुन्।उनै केन्द्रीय सदस्य दशौदीसँग गरेको कुराकानी–
चुनावी अभियानमा तपाईं पनि उम्मेदवारसँगै हुनुहुन्छ, रोल्पामा एमालेको अवस्था कस्तो पाइरहनुभएको छ ?
नेकपा (एमाले)को अवस्था रोल्पामा राम्रो देखिरहेको छु। यहाँका जनताहरूबाट हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ। त्यसैले हामी चुनावमा जित्नेमा ढुक्क छौँ र चुनावी अभियानमा सामेल छौँ।
रोल्पाको कतिपय गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसबीच तालमेल भएको छ, यो कसरी सम्भव भयो?
हामी एक्ला–एक्लै भिड्ने पक्षमा थियौं तर माओवादी केन्द्र रोल्पाले माधव नेपाल, चित्रबहादुर केसीको सानो गुटसँग चुनावी तालमेल गरेको पनि सुन्यौं। त्यसपछि कांग्रेस र हामीबीच एक खालको सहमति भयो र कतिपय पालिकामा चुनावी तालमेल भयो।
एमाले र कांग्रेसबीचको तालमेललाई रोल्पाली मतदाताले अनुमोदन गर्लान् कि नगर्लान्?
मतदाताले अनुमोदन गर्नुहुन्छ। कार्यकर्ता मिलिसकेपछि मतदाता र समर्थकहरूले अनुमोदन त गर्नुहुन्छ। रोल्पा जिल्लाको परिस्थितलाई मध्यनजर गरेर गरिएको एमाले–कांग्रेसको चुनावी तालमेल वैज्ञानिक नै छ।
देशव्यापी सतारुढ गठबन्धनविरुद्ध धेरैजसो ठाउँमा एमाले एक्लै छ। रोल्पामा एमाले र कांग्रेस केहि पालिकामा मिलेको छ। रोल्पामा माओवादीको चुनौती कस्तो छ?
माओवादीलाई हिजोको दिनमा जितेका थियौँ भन्ने घमण्ड छ। जहाँ माओवादीले जितेको थियो, त्यहाँ विपक्षीका कुराहरू नै सुनिएन। विगतका दिनमा हामीले माओवादीलाई सहयोग गरेका थियौँ तर उहाँहरुबाट हामीले कुनै प्रकारको सहयोग पाएनौँ। बजेटको पहल गर्ने कुरामा समेत माओवादीले सहमति देखाएन।
माआवादीले दश वटै पालिकामा जित्छु भनेर दाबी गरिरहेको छ, के यो सम्भव होला ?
माओवादीले जित्छु भन्नु सामान्य हो तर असम्भव छ। रोल्पामा माओवादी कमजोर भइसकेको छ। ठाउँठाउँमा स–साना समूहसँग चुनावी तालमेल गरिरहेका छन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले जिल्लाका दशमध्ये दुई पालिकामा जितेको थियो। के त्यो जित यो पटक पनि कायम नै रहन्छ होला ?
हामीले जित्ने कुरामा कुनै शंका छैन। एमालेले जिल्लाका धेरै पालिकामा चुनाव जित्छ। त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले जति ठाउँमा जितेको थियो, त्योभन्दा बढी ठाउँमा चुनाव जित्नेछ।
अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट जितेकाहरू प्रायःलाई पार्टीले यो पटक टिकट दिएन, त्यसमा उहाँहरूको असन्तुष्टि पनि त होला नि होइन?
यहाँ असन्तृष्टि हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। पार्टीमा घटबढ त भइहाल्छ नि। पार्टीले जसको आवश्यकता देख्छ, उसैलाई टिकट दिन्छ। त्यही पनि आउँदो चुनाव पनि त बाँकी छ।
रोल्पामा एमालेको भावी योजनाहरु के–के छन् ?
रोल्पाका मानिसहरूले धेरै हिसां भोगेका छन्। त्यहाँका मानिस अझैसम्म त्रासमा छन्। मानिसहरूको पहिलो प्राथमिता भनेकै स्वतन्त्र हुनु हो। त्यसैले हामी उहाँहरूलाई त्यो त्रासबाट निकालेर स्वतन्त्रता दिनेछौँ। उहाँहरू अहिले पनि त्रासमै हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई त्यो डरबाट बाहिर निकाल्ने छौँ। त्यसपछि जनताको सेवालगायत विकास निर्माणका कार्य गर्नेछौँ।